फागुनसम्म तीन अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गर्ने तयारी
दुई अर्ब खर्च नियन्त्रणको प्रयासमा निगम
काठमाडौं । वित्तीय संकटमा रहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी ४ महीनाभित्र तीन अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान शुरू गर्ने भएको छ । दुई वाइड बडी जहाज पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा आलोचित निगमले फागुनसम्ममा जापानको नारिता, साउदी अरेबियाको रियाद र चीनको क्वाङचाउ उडान गर्ने बताएको छ ।
बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले सम्बद्ध मुलुकले उडान अनुमति दिनासाथ निगम उड्न तयारी अवस्थामा रहेको दाबी गरे ।
तर, निगमले दाबी गरेजस्तै यी शहरमा उडान शुरू भइहाल्ने निश्चितता भने छैन । चीन उडानका लागि चीन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सेप्mटी अडिट टोली डिसेम्बरमा नेपाल आउने बताइएको छ । निगमले यसअघि नारिता र क्वाङचाउ उडान पुससम्ममा शुरू गर्ने बताएको थियो ।
उता, रियाद उडानका लागि जनरल सेल्स एजेन्ट जीएसए छनोटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यसपछि मात्र उडान प्रक्रिया शुरू हुने निगमले बताएको छ । साथै, थप सात अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यहरू— पेकिङ, संघाई, ढाका, रंगुन, हनोइ, नोनफेन र कोलम्बोमा उडान सेवा शुरू गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको बताएको छ ।
बुधवारको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अनावश्यक खर्च कटौती गरी रू. २ अर्बभन्दा बढी खर्च नियन्त्रणको योजना सुनाए । इन्धन, ओभरफ्लाइट, होटल, इन्जिनीयरिङ, कर्पोरेट, सेफ्टी लगायत क्षेत्रमा सुधार गर्दै खर्च नियन्त्रण गरिने उनको भनाइ छ । ‘इन्जिनीयरिङ विभागका धेरै काम स्वदेशी जनशक्तिबाटै हुन थालेको छ । यसले गर्दा पनि खर्च घटाउन भूमिका खेलेको हो,’ उनले भने ।
खरेलका अनुसार अब जहाजले अतिरिक्त इन्धन बोकेर हिँड्न नपर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको छ । त्यस्तै, अहिले भइरहेको रूटसमेत परिवर्तन गर्ने तयारीमा भएको जसले इन्धन लगायत खर्चमा बचत हुने निगमको दाबी छ ।
आलोचित ओसाका उडानका बारेमा खरेलले पत्रकार सम्मेलनमा निगमको बचाउ गरे । ‘जापान उडानको प्रारम्भिक दिनमा हतोत्साहित बनाउने काम भयो,’ उनले भने, ‘अहिले यात्रुको चाप बढेको छ, ओसाका उडान फाइदामा जानेछ ।’
खरेलका अनुसार निगमले आन्तरिक उडानमा डलर फेयर हटाउने भएको छ । खरेलले आन्तरिक उडानमा सबैका लागि समान भाडादर कायम गरिने जानकारी दिए । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाली र विदेशी यात्रुको भाडादर समायोजन गर्न केही महीनाअघि नै सबै हवाई कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
खर्च नियन्त्रणको फेरिस्त सुनाएका खरेलले वाइडबडी जहाज किन्दा लिएको ऋणको किस्ता भने तिर्नसक्ने अवस्थामा निगम नरहेको बताए । ‘उक्त ऋण तिर्न सरकारसँग कुरा भइरहेको छ’, खरेलले भने, ‘हामी छिट्टै तिर्ने गरी व्यापार गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छैनौं, तर व्यवसाय सुधार आएपछि विस्तारै तिर्छौ ।’
पछिल्लो समय आर्थिक संकटमा परेपछि निगमले रू. २० अर्ब पूँजी थप्न सरकारसँग माग गरेको थियो । तर, ठोस योजनाविना पूँजी वृद्धि गर्न नसकिने जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पाएको थियो । हाल रू. ३७ अर्ब ऋणमा रहेको निगमले एयरबसका दुई न्यारो र दुई वाइड बडी विमान खरीदका क्रममा कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतसँग लिएको ऋणको किस्तासमेत निगमले तिर्न सकेको छैन ।
निगम सुधारका लागि सुझाव दिन गठित पछिल्लो कार्यदलले निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लैजान सुझाव दिएको छ । निगमको व्यवस्थापकीय सुधार गर्न विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको कम्पनी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको थियो ।